Bandhig Faneedka UMIDIGI 2022: Taleefannada Cusub, Sameecado-madaxeedka, iyo Alaabooyinka Kulul waxa la heli doonaa ilaa 55% | Androidsis
Bandhig Faneedka UMIDIGI 2022: Taleefannada cusub, sameecadaha dhegaha iyo alaabada caanka ah ayaa la heli doonaa iyada oo la dhimay ilaa 55%
Emilio Garcia | 28/04/2022 11:30 | La cusbooneysiiyay 28/04/2022 11:31 | Aaladaha Android, Qalabka kale
Bandhig Faneedka UMIDIGI 2022 Dhawaan ayay iman doontaa. Waa wax iska caadi ah in shirkaddani ay sannad walba xusto mid ka mid ah kuwan, horena waanu u xaqiijinay ayaa dhici doonta 19-ka May. Marka lagu daro badeecooyinka caanka ah iyo qiimo dhimista ilaa 55%, UMIDIGI ayaa sidoo kale ku dhawaaqday taas ayaa soo saari doona qaar ka mid ah taleefannada casriga ah ee cusub iyo taleefoonnada dhegaha ee TWS oo leh astaamo la yaab leh. Hadda laga bilaabo ilaa bilawga dhacdada, waxaad sidoo kale ku biiri kartaa hawlahooda si aad ugu guulaysato abaal-marinaha, abaal-marinaha toddobaadlaha ah iyo wax ka badan.
UMIDIGI waxay dhejisay muuqaal qarsoodi ah oo ah aaladaha soo socda boggaaga facebook Usbuucii la soo dhaafay. Hadda, mid ka mid ah aaladaha soo socda ayaa lagu muujiyey waxqabadkooda si ay taageerayaashooda u helaan qiimo dhimis 50% taleefankooda casriga ah - UMIDIGI F3, badeecada ugu weyn ee taxanaha F3. Sida ay sheegayaan xogta la helay. UMIDIGI F3 waa nooca la cusboonaysiiyay ee A13 Pro. F3-ka cusub wuxuu leeyahay CPU ka awood badan iyo RAM iyo ROM ka weyn. Waxayna ka kooban tahay nakhshad dhammaystiran oo 5-midab ah, oo bixisa khibrad haynta wanaagsan iyo doorashooyin badan oo macaamiisha ah.
Qalab kale oo la soo bandhigay waa UMIDIGI Power 7 Max, iyada oo ku saleysan xogta aan ka helnay shirkadda. Qalabkani waa Protagonist ee taxanaha Power 7 oo la iman doona batari 10000mAh cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, macluumaad dheeri ah oo ku saabsan labada taxane ee cusub ee soo socda ayaan wali la garanayn, laakiin waxa aan balan qaadi karno ayaa ah in lagu iibin doono xaflada faneedka UMIDIGI 2022.
Laakiin wax walba kuma saabsana mobilada: UMIDIGI waxay sidoo kale soo saari doontaa taleefoonnada dhegaha-dhegaha ee stereo-ga wireless-ka cusub: UMIDIGI AbleBuds Bilaash. Sannadkii hore, shirkaddu waxay bilawday taxanaha AirBuds, kaas oo bixiya tayada maqal ee cajiibka ah iyo joojinta buuqa firfircoon ee taleefoonnada gacanta ee miisaaniyada. Markaa waxaan ka filan karnaa tafaasiil aad u fiican samee-madaxeedka cusub ee wireless-ka kaas oo sidoo kale la iibin doono May 19.
Marka lagu daro qalabka cusub, alaabtii moodada hore waxay sidoo kale la heli doonaan heshiisyo waaweyn inta lagu jiro Bandhiga Faneedka 2022. Dhab ahaantii, rasiidhada iyo qiimo dhimista, Taageerayaasha UMIDIGI way awoodaan iibsato BISON GT2 5G ee caanka ah, A13 Pro, A11 Pro Max iyo in ka badan oo qiimihiisii ​​ugu hooseeyay abid. Intaa waxaa dheer, UMIDIGI waxay qabanaysaa tartamo gudaha shabakadaha bulshada. Hadii aan ka qayb qaadano oo aanu ka mid noqono kuwa guulaystay, waxa aanu awood u yeelan doonaa in aanu ku iibsano UMIDIGI F3 ee soo socda qiimo dhimis 50% ah oo ku salaysan qiimaha iibka inta ay socoto xaflada.
Wax walba, Bandhig Faneedka UMIDIGI 2022 waxay ahaan doontaa fursada ugu fiican ee lagu heli karo alaabta shirkada qaybta hore ee sanadka. Waana taas, marka lagu daro qiimayaasha jaban, waxaad sidoo kale ku raaxaysan kartaa qiimo dhimis weyn, kuubannada iyo hadiyado ka qaybqaadashada dhacdadan.
Haddii aad tahay taageere UMIDIGI run ah oo aad rabto inaad ka mid noqoto Bandhig Faneedkan 2022, tag Ku socota website-ka rasmiga ah ee UMIDIGI macluumaad dheeraad ah iyo fursad aad ku guuleysato weyn inta lagu guda jiro dhacdadan isku mar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Bandhig Faneedka UMIDIGI 2022: Taleefannada cusub, sameecadaha dhegaha iyo alaabada caanka ah ayaa la heli doonaa iyada oo la dhimay ilaa 55%
Qaababka Kindle: dhammaan fursadaha lagu akhriyo buugaagta Amazon ebook reader
Sida loo tirtiro wax kasta oo maanta lagu arkay browserka